Zayed University - WeMfundo ePhakamileyo phesheya kwi UAE
Zayed University Iinkcukacha
isixeko : Abu Dhabi
Musa ukulibala ukuba ukuxoxa University Zayed
Babhalise kwi University Zayed
Zayed University inkqenkqeza phambili ezintsha emfundo kazwelonke nawengingqi. yasekwa ngonyaka ka 1998 kwaye ngebhongo bethwele igama UMseki beSizwe - ongasekhoyo Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, eli ziko flagship uye wadibana eliphezulu ekulindeleke kaMongameli. namhlanje, Zayed University ezisixenxe ezimbini maxesha eDubai and Abu Dhabi ukuba ukwamkela zombini abafundi kazwelonke neyamazwe.
Zayed University uya kuba yunivesithi elikhokelayo kwi-United Arab Emirates elivunywe jikelele inxaxheba yalo impumelelo zemfundo nenkcubeko kunye nokwandiswa kophuhliso loqoqosho nentlalo.
Zayed University uya kubalungiselela abafundi abafanelekayo abakwaziyo negalelo ekwakheni isizwe ngokuthi kuqhutywe specializations kunye neenkqubo zokufunda afane imigangatho yamazwe ngokubonelela imeko yokufunda ezigqwesileyo ukomeleza indima eyunivesithi njengenkosana inkqubela yophando lwenzululwazi kunye inkonzo yasekuhlaleni.
abafundi yoluntu yentsebenziswano leMfundo apho, ubuhlakani kunye nabasebenzi umsebenzi kunye ukusukela yophando kunye nolwazi.
Ingqalelo zokuphatha ngokubambelela le migangatho iphezulu yokuziphatha buqu, ezisekelwe phezu kokuhlonipha, ukunyaniseka, iinxa, uxanduva kunye nokunga ukuziqhelanisa nokuziqeqesha.
Ezintsha ngokuthi kwamkelwe nophuhliso izenzo liphezulu yehlabathi ekufundiseni, zokufunda kunye nophando.
Intsebenziswano kunye nentsebenziswano ukuqinisekisa impumelelo yemishini Zayed University kunye neenjongo zeqhinga kunye ukusebenza ubuninzi kunye nokusebenza.
Ubunkokheli esekelwe ukugqwesa yolawulo unxibelelwano oluqhubekayo phakathi bonke abachaphazelekayo University kunye ngokuphandle ukuba ezinye iinkcubeko, ejongene mpela yaye kakuhle nabo, ngaphakathi nangaphandle yunivesiti
Ukuseka bume yemfundo nangokukrola-ngohlangothi okhuthaza bokuyila ezintsha.
Lungisa abafundi abafanelekayo abakwaziyo igalelo kwinkqubo yophuhliso, kwaye abo mveliso e uhlanga lwabo, baxhotyiswe ngezakhono nokuzikisa, nevulelekileyo kwihlabathi elibangqongileyo.
Ndihlangule ngemfundo esemgangathweni ophezulu ijonga ukuba abafundi avuyisayo’ ulwazi kunye nezakhono.
Ukuhlaziya inqanaba uphando yeYunivesithi.
Qinisekisa ilungiselelo zonke iinkonzo zolawulo ngokuthobela kunye nomgangatho, ukusebenza kunye elubala imigaqo.
Ukuhambisa inkcubeko ezintsha kumbutho
Unxibelelwano Sciences Media
Science Environmental noZinzo
Psychology and Services Human
Ezobuchwepheshe (Security & Network Tech)
Systems Information and Management Technology
Ezobuchwepheshe (Enterprise Computing)
ukucebisa & Dev't Academic
Uyafuna ukuxoxa University Zayed ? nawuphi na umbuzo, izimvo okanye ncomo
Ukubuyekezwa Zayed University
Dibanisa ukuxoxa University Zayed.